Ọpụpụ n'èzí, Osisi Ogige Ọgbara Ọhụrụ - Piedra
Ihe osise nke ihe osise
Igwe anaghị agba nchara ọkpụkpụ
Cast Bronze ọkpụkpụ
Ihe osise amara ama
Ihe nlere mgbidi
Ihe Odide Ọpụpụ Ọgbara
Faiba glaasi Animal ọkpụkpụ
Nnukwu Ihe Mpụga n'èzí
Ogige Ihe ịchọ mma
Corten steel ọkpụkpụ
Piedra (Xiamen) ọkpụkpụ Co., Ltd.
PIEDRA (XIAMEN) AKWULKWỌ AKW COKWỌ CO., LTD. bụ ọkachamara na-eme ihe osise na akpụrụ akpụ, dị ka ihe ọkpụkpụ, ihe a kpụrụ akpụ ọla, ihe a kpụrụ akpụ, akụnụba a na-akpọ fiberglass, wdg. Enwere ike iji ihe ọkpụkpụ ọla na ihe osise a kpụrụ akpụ dị ka ihe a na-ahụ n’ubi, nnukwu ihe a na-eme n’èzí, ihe ịchọ mma mgbidi, ihe ịchọ mma, wdg.
Anyị nwere ezigbo ndị otu egwuregwu: ndị nwere omenka 3D nwere nka / ndị nka, ndị ọrụ teknụzụ, ọmarịcha ahịa, ndị nyocha QC ọkachamara, ndị otu ọrịre siri ike, na-enye ọtụtụ ihe maka ọrụ nka anyị dị elu. Ihe olu a na-enyere onye ahịa anyị aka ị nweta ahịa nke abụọ na ngosi nka a ma ama na USA, onye ahịa USA bụ onye ahịa anyị ogologo oge, nyere anyị ọtụtụ iwu kwa afọ.
PIEDRA (XIAMEN) AKWULKWỌ AKW COKWỌ CO., LTD. bụ ọkachamara na ịkpụ ihe ọkpụkpụ na ihe akpụrụ akpụ, dị ka ihe ọkpụkpụ, ihe a kpụrụ akpụ nke ọla, ihe enyemaka, ihe ọkpụkpụ ọla, wdg. Enwere ike iji ihe ọkpụkpụ ọla na ihe osise ọla dị ka ihe osise ogige, nnukwu ihe a na-egwu n'èzí, ịchọ mma mgbidi, ịchọ mma ụlọ, wdg. ..
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD dị ka ụlọ ọrụ ọkachamara na ndị na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ anyị, nke nwere ọtụtụ ahụmahụ na ịkpụ ihe ọkpụkpụ, ihe a kpụrụ akpụ ọla kọpa, akpụ akpụ fiberglass resin. Anyị na-enye ngwaahịa dị mma mgbe niile, njikwa njikwa ike dị mma, ọrụ azụmaahịa kachasị mma maka ndị ahịa. Afọ ojuju gị bụ ihe anyị na-akpali iji wee kee ihe osise a na-apụghị ikweta ekweta.
Daalụ maka nnukwu ihe osise ị mewooro anyị n'ime afọ ndị ahụ. Ihe osise ndị ahụ anaghị agba nchara bụ ihe ịtụnanya n’ezie ma dọta ọtụtụ ndị njem na ogige golf.
Banyere Flọ ọrụ
Ihe osise nke ihe omuma nke oge a
Eserese nke Nnukwu Enyo ahụ dị n'ụdị a na-adịghị ahụkebe, nke na-adị ka ero nkịtị. The size bụ nnukwu na ihe 2m elu na adabara ịtụkwasị n'ime ime ụlọ nka ịchọ mma ọkpụkpụ. Enwere ike idobe akpụrụ akpụ nwere ogologo oge ma ọ bụghị nsogbu idobe afọ 50-80. Yabụ ọ bụrụ n’ịchọrọ ihe ọkpụkpụ aka dị ka nke a, biko kpọtụrụ anyị ozugbo. Anyị ga-enye gị ọnụahịa asọmpi maka ntụnye aka gị. Ntulee Aha ọkpụkpụ: Abstrac ...
Golden Flower igwe anaghị agba nchara ọkpụkpụ
Ifuru Agbara Igwe Nke Acha Agwara gi? Nhazi ahụ bụ nke dị mma ma bụrụkwa ihe na-atọ ụtọ. Echere m na enwere ike idobe ihe ịchọ mma a ifuru n’ubi ma ọ bụ n’ogbe ka ihe ndozi nka. Nke a nnukwu metal ọkpụkpụ bụ otu n'ime ọkacha mmasị m ọkpụkpụ na osisi ọkpụkpụ oké njọ. Anyị nwere ike ahaziri ihe ọkpụkpụ ọ bụla dị ka ihe ị chọrọ. Weebụsaịtị anyị nwere ụdị ngwaahịa dị iche iche ka ịnwere ike lelee ya maka akwụkwọ. Nkọwapụta ihe osise Ọgbara ọhụrụ ogige ihe ndozi Dimension ngwaahia ọkpụkpụ NO ...
Large N'èzí akpụ, igwe anaghị agba nchara ọkpụkpụ ...
Juru gị anya site na nke a nnukwu ero anaghị agba nchara ọkpụkpụ? A wụnye ya na mpaghara ahihia, USA. Ihe ọkpụkpụ ero a nwetara ebe nke abụọ n'otu ihe ngosi nka ama ama ama ama ama n'etiti USA na ihe osise 50. ou nwere ike ịhụ onwe gị site n'elu, n'ihi na ọ na-eme ka enyo enyo na-enwu gbaa site na ịgbado ọkụ na ịkpụcha. Ezubere dịka udi olu, ọ na-adọrọ adọrọ n’anya mgbe ị hụrụ ya ebe ahụ. Ndị ahịa anyị si mba ọzọ nwere nnukwu ekele maka nnukwu ihe oyiyi a dị n'èzí. Gịnị ma họrọ ya dị ka ubi gị ma ọ bụ yad ...
Biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24hours.
Ihe eserese n’èzí maka ihe ngosi ngosi
Ihe ọkpụkpụ a na-ahụ n’èzí bụ ihe dị oke mma nke enwere ike idobe dị ka ihe eji achọ mma n’èzí, dịka icho mma nke square, ihe ngosi nka na ihe ndị ọzọ. Ejiri ụdị n'ike mmụọ nsọ, eji enyo enyo mee ya na agba edo. Ọ dịkwa iche na agba ọla edo na-ewu ewu, nke ihe oyiyi a na-acha odo odo nọ na electroplating agba agba ka ị nwee ike ịhụ echiche onyinyo ebe a. Ma, agba ọla edo nkịtị enweghị ike ịhụ onyinyo. Ọ bụrụ n’inyocha ihe ọ bụla n’agba mkpụrụ osisi nwere mmasị n’ebe ị nọ, biko nweere onwe gị izigara anyị ozi sales1 @ b…
Kedu ihe ọkpụkpụ nka
Ihe osise ihe osise a na-arụ ọrụ na-enweghị atụ na nhazi oghere na ịchọ mma. Enwere ike ịkụnye ihe ịchọ mma ọla n'èzí ma ọ bụ ebe dị n'ime ụlọ, enwere ike iji ya mee ihe nkiri ọdịnala. Anyị maara na metal ọkpụkpụ na-agụnye ụfọdụ ụdị ndị dị ka igwe anaghị agba nchara ọkpụkpụ, ọla kọpa s ...
Kedu ihe kpatara eji ejiri ọla kọpa mee ihe
Ọkpụkpụ ọla nwere ogologo oge enwere ike idobe ma dobe karịa otu narị afọ. Tụnyere ihe ndị ọzọ a kpụrụ akpụ, ihe ọkpụkpụ ọla nwekwara ogologo akụkọ ihe mere eme, ọ́ bụghị ya? Anyị maara na nkedo ọla ọkpụkpụ nwere ike ịbụ n'ime ọgụgụ, anụmanụ wdg udi, esighịkwa nkeji na pụrụ iche nkọwa chọrọ ...
Bụ corten ígwè weldable?
Corten steel ma ọ bụ igwe ihu igwe bụ ụdị pụrụ iche nke usoro nchara dị n'etiti igwe anaghị agba nchara na carbon carbon nkịtị. Ọ nwere ikuku na-eguzogide ikuku na njiri mkpuchi mkpuchi karịa nchara carbon nkịtị, ọnụahịa ahụ dịkwa ụba karịa igwe anaghị agba nchara. Igwe corten nchara bu ...
Ekwentị + 86-13950080662
Adreesị Ime ụlọ 1407, Changan Bldg, No.75-77 Lvling Road, Huli District, Xiamen, 361009, Fujian, China
Email zụọ ahịa1@brandsculptures.com
Ihe osise Tarrice
Ihe osise Cathy